I-Black Shark elandelayo yeXiaomi iqinisekisiwe nge-27-watt yokutshaja ngokukhawuleza | I-Androidsis
I-Xiaomi ye-Black Shark ezayo iqinisekisiwe nge-27-watt yokutshaja ngokukhawuleza
UXiaomi uyityhilile uphawu lwe-smartphone Black Shark Kunyaka ophelileyo kunye nokuqala kwemodeli yokuqala yale nto, esebenzisa iQualcomm's Snapdragon 845 kwaye ineempawu midlalo. Ukusukela ngelo xesha, ifemi ikhuphe ezinye iimodeli ezimbini ezilandelanayo kwimidlalo, eyiyo Black Shark Helo y Black Shark 2. Ngoku kuza enye, ngokucacileyo.
Ngokwento ekhutshwe liziko ledatha lase China lase China, I-smartphone elandelayo ye-brand iza kuza netekhnoloji ye-27-watt ekhawulezayo. Oku kusilungiselela ukumiliselwa kwayo.
Isiphelo sendlela sivele kwiRegistry kunye nenombolo yemodeli «DLT-A0» kwaye iqinisekisiwe ngumzimba ovunyiweyo. Isatifikethi sakhe khange siveze okuninzi, kodwa sikuvezile oko ixhasa ukutshaja okukhawulezayo okungama-27W (9V 3A, 12V 2.25A, 20V 1.35A). Njengento ekufuneka uyigcinile engqondweni, iBlack Shark 2 ikwaxhasa ukubizwa ngokukhawuleza kwee-watts ezingama-27, njengoko isenza Xiaomi Mi 9.
Ukuza kweFowuni evunyiweyo yoKrebe oMnyama ene-27-Watt ekhawulezileyo
Asinakuqiniseka ukuba yeyiphi imodeli ezayo, ukuba yi-Black Shark 3 okanye uhlobo oluthile lokuhlaziywa kwe-Black Shark 2, njenge-Black Shark Helo ye-Black Shark yasekuqaleni. Zininzi izinto esingazaziyo malunga nale fowuni intsha. Nangona kunjalo, sicinga ukuba iyakuba luhlaziyo lweBlack Shark 2.
Khumbula ukuba iBlack Shark 2 isebenzisa isikrini se-AMOLED esingu-6.39-intshi ngesisombululo esigcweleyo se-pixels ezingama-2.340 x 1.080, iSoC Snapdragon 855 isuka kwiQualcomm, Adreno 640 GPU, 6/8/12 GB ye-RAM, 128/256 GB yendawo yokugcina yangaphakathi, ibhetri engama-4,000 mAh, imodyuli engasemva eneefoto ezimbini ze-12 MP kunye nekhamera engaphambili yee-megapixels ezingama-20 zee-selfie, iifowuni zevidiyo kunye nokunye. Ukusuka kwezi nkcukacha, sinokulindela ngcono kwi-brand elandelayo ye-brand.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Xiaomi ye-Black Shark ezayo iqinisekisiwe nge-27-watt yokutshaja ngokukhawuleza
Intengiso yeHuawei yokuthengisa eTaiwan yehle kakhulu
Imiyalezo yesicelo iya kuba neefilitha ezinjengezo zeSpapchat